उपत्यकाको प्रहरीलाई पनि प्रदेश मातहत दिनुस् : मन्त्री शाक्य- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अजयक्रान्ति शाक्यले काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति-सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीको इकाइहरुलाई पनि वाग्मती प्रदेश प्रहरीको मातहतमा राख्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘वाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । तीमध्ये १० वटा मात्रै वाग्मती प्रदेश प्रहरीको मातहतमा रहेका छन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु, बाँकी जिल्लाको प्रहरीलाई पनि वाग्मती प्रहरी मातहतमा राखियोस्,’ मन्त्री शाक्यले भने । काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ (क)बाट निर्वाचित मन्त्री शाक्यलाई काठमाडौं–१२, २१ र २२ ले लगनटोलमा गरेको संयुक्त बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाक्यले आफूले दैनिक बाह्र घण्टासम्म खटेर काम गरिरहेको समेत बताएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ५० वटा योजना एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको बताए । ‘माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यज्यूको नेतृत्वको यो सरकारले निरन्तरता पायो भने एक महिनामा ती सबै योजनाको टुंगो लगाएर अरु थप पचासवटा योजनासहित त्यसका लागि बजेट बनाएर अघि बढ्छु,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएन भने आउने मन्त्रीका लागि यो आर्थिक वर्षका लागि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहने छैनन् । उहाँहरु मन्त्रीको कुर्सीमा बसे मात्रै हुन्छ ।’
मन्त्री शाक्यले आन्तरिक मामिला मन्त्रीको हैसियतमा आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै प्रदेशको शान्ति–सुरक्षाका सन्दर्भमा विशेष चासो राख्दै कार्यक्रमहरु अघि बढाएको बताए । मन्त्री शाक्यले वाग्मती प्रदेशले १०२ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको समेत जानकारी दिए ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १५:१४
बालबालिकासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ’ भन्ने छ । अहिले पनि नेपाली आमाका सन्तानहरूले सहजरूपमा जन्म दर्ता गर्न पाउने स्थिति छैन । जसले जन्मदर्ता पाएका छन् तिनले पनि नागरिकता पाउने स्थिति छैन । पहिचान नपाएका कारण उनीहरूलाई कुनै पनि मौलिक हकले छोएको छैन ।
आश्विन ३, २०७८ बिन्दा पाण्डे
काठमाडौँ — संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा कतिपय मौलिक हक तुरून्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ भन्ने संविधानमा लेखियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकहरूले मौलिक हक पाउने हो । तर अहिले पनि हजारौं सन्तानहरू नागरिकता नपाएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको कुरा गर्दा हामी खालि नागरिकता पाएका व्यक्तिको मात्र कुरा गर्छौँ ।
सबैभन्दा पहिलो मौलिक हक भनेकै पहिचान पाउनु हो । आजसम्म पनि पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बालबालिकासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ’ भन्ने छ । अहिले पनि नेपाली आमाका सन्तानहरूले सहजरूपमा जन्मदर्ता गर्न पाउने स्थिति छैन । जसले जन्मदर्ता पाएका छन् तिनले पनि नागरिकता पाउने स्थिति छैन । यो संख्या लाखमा छ । एकजनाको मात्रै पनि हक हनन हुनु सामान्य स्थिति होइन भन्ने मान्यता हुन्छ । तर लाखौं नेपाली सन्तानहरूले पहिचान पाएका छैनन् । पहिचान नपाएका कारण उनीहरूलाई कुनै पनि मौलिक हकले छोएको छैन । यो गम्भीर विषय हो ।
जो नागरिक भएका छन्, उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामीले प्रणाली परिवर्तन गर्‍यौं । प्रणाली परिवर्तन गरेपछि त्यसैअनुसारको संविधान पनि बनायौं । तर संविधानको मर्म र आशयअनुसारको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौं । अरू धेरै कुरा छाडौं, हामी संघीयतामा गर्‍यौं । संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहका जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व के हो ? उनीहरूको काम के हो ? भन्ने खालको कुरा नै आजसम्म ती जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन ।
म प्रतिनिधिसभाको सांसद छु । संघीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको मूल दायित्व प्रणालीअनुसारको नीति र कानुन बनाउने हो । विकास निर्माणको दायित्व स्थानीय तहको हो । तर कति समयसम्म त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि हिजोको जस्तै स्थानीय निकायका प्रतिनिधि हौं भनेजस्तो अनुभूति गरेर बस्नुभयो ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि मात्रै ‘हामी त सरकारै रहेछौं, हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछौं’ भनेर सरकारको अनुभूति गरेर काम गर्न थाल्ने स्थिति रह्यो । संघीय तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका जतिपनि साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिले पनि निर्वाचनक्षेत्रमा कहाँ पुल, बाटो, स्कुल बनाउने र कहाँ धाराको उद्घाटन गर्ने भनेर हिँड्ने सोचबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । प्रणाली परिवर्तनपछि भूमिका पनि परिवर्तन भयो है भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौं । यो कुरा राज्यले पनि बुझाउन सकेन, राजनीतिक दलहरूले पनि बुझाउन सकेनन् र हामी पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढ्यौँ ।
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा मानिसका मौलिक हकसँग जोडिने विषयहरू हुन् । गास रोजगारीसँग जोडिन्छ । रोजगारीबारे संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा कानुन ल्यायौं । त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले पनि स्थानीय तहमा पञ्जीकरण भएर श्रमिक परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरियो । तर आजसम्म त्यो कुरा लागू भएको छैन । श्रमजिवीलाई पहिचान दिन सकेका छैनौं ।
त्यस्तै, बासको कुरा हुन्छ । संविधानमा जुनजुन समुदायलाई आवासको लागि एकपटक भूमि दिने भन्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । हाई स्कुलसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेपछि पनि उनीहरूलाई यो तपाईंहरूको दायित्व हो है भन्ने अनुभूति गराउन सकेनौं । स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी स्थानीय परिवेशअनुसारको पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने कुरा लेखेका छौं तर त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन ।
स्वास्थ्यबारे कुरा गर्ने हो भने कोभिड–१९ का कारण मानिसमा छटपटी छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि उपचारको कुरा हो भन्ने बुझ्न सकेनौं । स्वास्थ्य भनेपछि अस्पताल, जनशक्ति भनेपछि डाक्टर र नर्स । त्यहाँभित्र मानसिक स्वास्थ्य पर्छ । त्यसका लागि वडासम्म मनोविमर्शकर्ताहरू तालिम दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाउन सकेनौं । त्यसैले मौलिक हकमा जुन स्वास्थ्यका कुरा गरिएको छ, आधारभूत स्वास्थ्यमा मानसिक स्वास्थ्य पनि पर्छ भन्ने राज्यले अनुभूति गराउन सकेको अवस्था छैन । यद्यपि, आधुनिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भने भएको छ ।
हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं, विकासको कुरा गरिरहेका छौं तर नीतिनिर्मातादेखि नागरिक तहसम्म भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने मानसिकताबाट कसैलाई मुक्त गर्न सकेनौँ । प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्म विकास भनेको बाटो, धारा, पुल, भवन, डाँडाको चुचुरामा ‘भ्यू टावर’ भन्ने छ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै हैन, विकास भनेको मानवीय पक्ष त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मानवीय पक्षको विकास गर्न सकेनौं भने भौतिक विकास गरेर मात्र त्यसले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन । त्यसले मानवीय मर्यादा र मानवीय सम्मान दिन सक्दैन । भौतिक र मानवीय विकासको कुरालाई सँगसँगै उत्तिकै महत्वसाथ लिनुपर्‍थ्यो, त्यो गर्न सकेनौं ।
गणतन्त्रात्मक राज्य र राजतन्त्रात्मक राज्यको फरक बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । गणतन्त्रमा हरेक नागरिक राज्यका अंग हुन् । बराबर हैसियतका हुन् । प्रधानमन्त्री वा अन्य कोही पदाधिकरी वा तपाईं, म नागरिकको हिसाबले बराबर हौं । बराबर हैसियत भइसकेपछि संविधानमा लेखेको कुरा कानुनमा प्रतिबिम्वित गर्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तीनवटै तहको जिम्मेवारी हो र नागरिकको पनि हो । सबै नागरिक राज्य हुन् भन्ने हामीले बुझाउन सकेका छैनौं। राज्यको सम्पत्तिबाट सडकछेउमा लगाएको विरूवाको पात निमोठ्दै र डाँठ भाँच्दै हिँड्नेले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिरहेको छु भन्ने कुरा जुन दिनसम्म अनुभूत गर्न सक्दैनौं तबसम्म परिवर्तन हुन्न । यी मसिना कुरा कार्यान्वयनको वास्ता गरेनौं । जुन दिनसम्म यी मसिना कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्ने र बुझाउने काम गदैनौं तबसम्म संविधानको धारामा लेखेर मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन ।
संविधानमा मौलिक हक र अधिकारका कुरा लेख्यौं तर पहिला जे गरिरहेका थियौं त्यही क्रममा गयौं । हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयौं । गणतान्त्रिक संविधान बनाइसकेपछि हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि फड्को मार्नुपर्‍थ्यो । कार्यान्वयनको पक्षमा हिजो जे गरिआएका थियौं, त्यो मात्रै गर्‍यौं । मौलिक अधिकार लेख्ने बेलामा गणतान्त्रिक हिसाबबाट, क्रान्ति भयो भन्ने हिसाबबाट दस्तावेजले फड्का मार्‍यो तर कार्यान्वयन भने हिजोकै गतिमा अगाडि बढ्यो । हामीले केही पनि गरेनौं भन्ने त होइन, केही राम्रा काम पनि गरेका छौं र परिवर्तन पनि भएको छ । हाम्रो सोच्ने तरिका भने हिजोकै जस्तो रह्यो । त्यसैले दस्तावेजले फड्को मारेजस्तो हाम्रा सोच, व्यवहार र मानसिकलताले फड्को मार्न सकेन । हाम्रा योजना र कार्यान्वयन गर्ने जुन खालको प्रक्रिया छ त्यसले फड्को मार्न सकेन ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे संविधानमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ । पहिला पनि त्यो लेखिएको थियो यसको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर । त्यो हो भने किन लेखिराख्ने भनेर प्रश्न गरियो । त्यसपछि सरकारले यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने छ । त्यसपछि संसद्‌मा छलफल गरिनेछ भन्ने लेखेका छौं । अहिलेसम्म त्यो तपाईंहरूले पाउनुभएको छ ? संघीय संसद्को संयुक्त समिति पनि गठन भएको छ । त्यो समितिले आजसम्म के गरिराखेको छ ? त्यो समितिले यो कामबारे कति घच्घच्याएको छ ? त्यसैले तलदेखि माथिसम्म जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दायित्व बुझेर कति काम गर्न सके ? यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको त्यो समिति पनि हो । त्यो नयाँ व्यवस्था हो । नयाँ समिति पनि बनाइएको छ । जान्ने बुझ्ने भन्ने सांसद नै त्यसमा चुनेर राखिएको छ । तर न नेपाल सरकारले प्रगतिशील कार्यान्वयनको एउटा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ न संसद्‌मा आएको छ न त्यो समितले नै आजसम्म हामीले यति पहल गर्‍यौं भनेको छ । तर सरकारले प्रतिवेदन ल्याएन भनेर प्रतिवेदन नै ल्याएको छ । अनि सोचमा परिवर्तन कहाँनेर भयो त ?
हामीले घच्घच्याउने कुरा कहाँनेर गर्‍यौं त ? त्यसैले हाम्रो राजनीति कसले, कति सुविधा पाउने भन्नेमा अलि धेरै देखिन्छ । राजनीति भनेको सेवा हो पेसा होइन भन्ने स्थापित गर्न जरूरी छ । राजनीति गर्ने भनेको जिन्दगीभर गर्ने काम हो भन्ने जुन मानक बनेको छ, यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ । राजनीति सेवा हो, केही समय गर्छु र बाँकी समय आफ्नो पेसा गर्छु भन्ने सोचेर जुन दिनसम्म राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म राजनीतिलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन गाह्रो पर्छ ।
(प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद पाण्डेसँग ईकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १५:००